မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Tourist Attractions က ဘာဖြစ်မယ်လို့ သင်ထင်လဲ။ – YANGON STYLE
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Tourist Attractions က ဘာဖြစ်မယ်လို့ သင်ထင်လဲ။
ကမ္ဘာအနှံ့မှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ ခရီးသွားများအား မေးခွန်းတစ်ခုမေးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။
“ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Tourist Attractions က ဘာဖြစ်မယ်လို့ သင်ထင်လဲ ”
မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှမှာ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်များဝင်ရောက်ရာ ခရီးသွားဒေသ တစ်ခုအဖြစ် လူကြိုက်များရေပန်းစားလျက်ရှိပါသည်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို ယခုနှစ်နွေရာသီမှာ လာ‌ရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Tourist Attractions နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကို မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
YANGON STYLE သည် Fashion Snap ကဏ္ဍအတွက် ပါဝင်ကူညီပေးနိုင်သူများကို ရှာဖွေလျက်ရှိပါတယ်။
ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် instagram.com/yangon.style/ သို့ message ပေးပို့နိုင်ပါတယ်!
Rule number one when takingagood tourist selfie, stare directly into the sun to assert your dominance. Yangon's pretty cool – 2/3 #yangon #yangonmyanmar #yangoncity #yangonstreetphotography #myanmar #myanmartravel #myanmartrip #myanmarphotos #myanmar🇲🇲 #streetphotography #streetphotocolor #streetphotos #candid #rainingday #burma #rangoon #composition #symmetry #architecturephotography
A post shared by Damien Pedler (@damopedler) on Aug 26, 2019 at 8:10pm PDT
“ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတော်လေးစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။”
Just casually fixing my earrings while checking out this amazing view. 😉 * * * #myanmar #burma #bagan #travelphotography #travelgram #femaletraveler #blonde #blondetravels #myanmartrip #myanmartourism #nikon #nikond7500 #asia #wearetravelgirls #instadaily #latergram
A post shared by Taylor | Travel Blogger (@taytaysparks) on Aug 27, 2019 at 5:23pm PDT
“အရမ်းလှပပြီး တစ်မူထူးခြားတယ်! မြန်မာလို လှပပြီး၊ ထူးခြားကွဲပြားတဲ့နိုင်ငံမျိုး အခုထိမတွေ့ဖူးသေးဘူး”
She had to keep up to be kept up. #watermyhome
A post shared by MARÍA (Mash Doit) (@mashdoit) on Aug 8, 2019 at 4:35am PDT
“မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ သမိုင်း၊ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာ နဲ့ လူနေမှုဘဝပုံစံတွေ အားလုံးက ခရီးသွားတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်!”
15 giorni,9aerei,7hotel, 11 città,3fiumi,2laghie5 mezzi di trasporto diversi. Se andate in Myanmar ricordatevi di: 1. Ballare scalzi sotto la Shwedagon Pagoda, vi sembrerà che sia tutto d'oro; 2. PasseggiareaYangoon mangiando street foodacaso (anche se piove) dopo aver visitato il mercato di Thein Gyi. Nessuno straniero, vi sentirete come un alieno. 3. Fare tappaaLoikaw, anche se fuori dai circuiti, vi innamorerete del vero Myanmar; 4. Farvi portareaPampet Village da una guida con un permesso speciale: conoscere le "long neck women" non ha prezzo (e anche camminare nel fango con i sandali se è Green Season); 5. Navigare Inle Lake tra le palafitte scoprendo interi villaggi autostenibili, dove le strade non esistono. 6. Perdervi nel Word's Biggest Book di Mandalayenel mercato notturno in città; 7. Fare una foto nel bianco accecante di Mingunevedere il ponte in teak più lungo del mondoaU-Bein. 8. Scalare Mont Popa salendo scalzi 777 gradini tra scimmiee…molto altro. 9. Scottarvi i piedi tra gli stupa vecchi mille anni di Bagan, ma solo dopo aver visto il mercato del mattino: non credevo esistessero certi colori nel mondo (e anche tutte quelle mosche); 9. Dimenticarsi delle scarpe, anche in luoghi in cui non avresti mai immaginato di poter camminare senza. 10. Ringraziare chi viaggia con voi sopportando i numeriele esperienze di cui sopra, godendone con felicitàestupore insiemeate, grazie amore @aletto_80 #Myanmar ❤ . . . #trip #summer2019 #CercaMangiaVivi #love #aroundtheworld #burma #myanmartravel #burmese #fly #photography #pics #life #always #theend #bestevertrip #travelling #foods #days #ooo #aroundmyanmar
A post shared by LaVi (@unaviuna) on Aug 25, 2019 at 11:50am PDT
“လမ်းဘေးအစားအစာတွေကတောင် အရသာရှိတယ်! အင်း‌လေးကန်ရဲ့ သဘာဝအတိုင်းတည်ရှိနေမှုနဲ့ စိတ်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ကြိုက်တယ်! ပန်ပက်ရွာကိုလည်း သွားလည်ခဲ့တယ်! မြန်မာလူမျိုးတွေကို ချစ်တယ်!”
Boat tour yesterday and today bike riding along the same lake. I have seen so many beautiful things that I could fill my feed for the whole week 😍 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Villages out on the lake, Cows on the road. Tribal girls with ridicules long necks and acrobatic fishermens. Beautiful views and of coursealot of temples! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Yes the temples are beautiful but I'm starting to get tried on them
A post shared by Travel, Explore, Live (@travelontheborder) on Aug 19, 2019 at 5:51am PDT
“မြန်မာလူမျိုးတွေက ဖော်ရွေတယ်။ ပွင့်လင်းတယ်။ လမ်းသွားရင်းတောင် လူတွေက ကျွန်တော့်ကို ပြုံးပြကြတယ်။ လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ကြတယ်။ တော်တော်များများက အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာချင်တယ်လို့ ပြောကြတယ်။”
နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားဧည့်သည်များ ပိုမိုဝင်ရောက်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ သင်လည်း လမ်းမှာ တွေ့တဲ့ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေနဲ့ စကားစမြည် ပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်ရော??